Ajụjụ Ndị A Na-ajụkarị - Popular Jewelry
Make na-emere ọla edo edobere anya?
Ee, anyị nwere. Anyị na-eji ihe ndị kachasị mma. Anyị na ndị ahịa anyị na-arụkọ ọrụ iji chepụta na nka pụrụ iche ahaziri iche maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 30.
Choo ihe ndi ozo banyere achoro di iche-iche di nma na nke di egwu.
Kedụ ka m ga-esi nye iwu maka achịcha ma ọ bụ ezé ọla edo?
Y dị njikere maka ụfọdụ ihu? Na NYC You nwere ike ịga na ibe anyị raara onwe anyị nye ka ịmụtakwuo gbasara ịme achịcha emebere:
Choo ihe ndi ozo banyere udiri ihe eji eme otutu ihe Popular Jewelry.
Gini bu nha m?
Iji nweta echiche banyere otu ihe ọla ahụ kwesịrị isi dabara, ị nwere ike lelee ntule ndị a maka ụdị ọla dị iche iche:
Mgbaaka - Ntuziaka maka Wristwear (& Anklets kwa!)
Necklaces - Ahọrọ kacha mma maka olu gị
Pendants - Selecthọrọ mpempe kwesịrị ekwesị maka olu gị
Mgbaaka - sizehọrọ nha ụda ezi
Ị na-anabata kaadị akwụmụgwọ?
Ee, anyị na-anabata kaadị akwụmụgwọ niile bụ Visa, MasterCard, American Express na Discover. Na mgbakwunye anyị na-anabata Amazon Pay, Apple Pay, Google Pay, PayPal, na ọbụna Bitcoin. Ma ọ bụrụ na ị na-eche, anyị na-anabatakwa ezigbo ego, jiri ego siri ike mee. (Biko biko zigara anyị ozi.)
Kedu nhọrọ ịkwụ ụgwọ ndị ọzọ ị nwere?
Anyị na-anabata ọtụtụ ụzọ nkwụnye ụgwọ ndị ọzọ dị ka PayPal Checkout, nke ga-enye gị ohere ịkwụ ụgwọ iwu gị na ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị na ụlọ ahịa anụ ahụ anyị. Ọzọkwa, anyị na-anabata NFC (Near Field Communication) mobile ịkwụ ụgwọ dị ka Apple Pay, Android Play na Samsung Play. Anyị na-enyekwa ndị ahịa anyị nhọrọ iji kwụọ ụgwọ na ọtụtụ kaadị ma ọ bụ usoro ịkwụ ụgwọ maka ịzụrụ ihe n'ime ụlọ ahịa. Anyị na-anabatakwa waya, ụlọ ego / akara akwụkwọ, na iwu ego. Oge nkwụnye ụgwọ ndị ọzọ metụtara usoro ịkwụ ụgwọ ndị a. Na mgbakwunye, ịkwụ ụgwọ ga-ehichapụ tupu a tọhapụ ma ọ bụ zigara onye ahịa ahụ ngwaahịa.
Na-enye atumatu layaway?
Ee, anyị nwere. Atụmatụ aghụghọ anyị na-agbanwe agbanwe dị kwa izu site na ịkwụ ụgwọ kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ịchọrọ oge ịkwụ ụgwọ ahaziri, biko kpọtụrụ anyị.
You na enye gi ego?
Nkwenye! (pun zubere) Anyị kwenyere na ọla edo ekwesịghị ịbụ nke a na-agaghị enweta. Site n'uru ọnụ ahịa ọla edo na-abawanye mgbe niile, anyị na-egosipụta ụzọ anyị ga-esi mee ka ọmarịcha ọla anyị dị mma karịa maka mmadụ niile. Wezụga atụmatụ mgbanwe anyị dị ịtụnanya, ịzụrụ ihe n'ịntanetị eji ego enweta Kwenye na Ebe E Si Nweta Paypal. Ozugbo enwetara nkwado maka akara akwụmụgwọ, ị nwere ike lelee ụlọ ahịa intaneti anyị ka ị ga-ebinye ya na ị ga-ewetara gị ego nhọrọ ego. Iji PayPal akwụmụgwọ ị ga - ahọrọ PayPal ma jiri akara akwụmụgwọ ha kwadoro ka ịbanye.
Kedu mgbe iwu m ga-abata?
Dị ka ụlọ ọrụ ji nganga tọrọ ntọala & dabere na New York, anyị maara na ndị ahịa anyị anaghị enwe ike iwepụta oge dị ukwuu site na nhazi oge ha ịzụ ahịa na ụlọ ahịa anyị. N'otu oge ahụ, anyị maara na ha ga-enwe mmasị na ịdị mma ịme nke a ebe ọ bụla ha nọ, yana iji oke mkpa. Ọ bụ ya mere anyị ji agba mbọ ịnye nhazi nhazi ngwa ngwa dị ka mmadụ nwere ike ime- n'ọtụtụ ọnọdụ, iwu ndị nwere njikere iyi ihe na ngwaahịa ga-ebupu n'otu ụbọchị azụmahịa. Maka ndị nwere nnukwu nsogbu banyere onyinye oge ikpeazụ ahụ, anyị na-enye nnyefe otu ụbọchị na mpaghara Greater New York City (site n'aka ndị mmekọ nnyefe anyị chọrọ) UberRUSH na Ụmụ akwụkwọ ibe.)
Maka ịmatakwu banyere nnyefe, ị nwere ike ịlele iwu mbupu anyị ebe a.
Kedu ka m ga-esi lekọta ọla m?
Purchazụta mma niile mara mma n’aka ndị na-ewu ewu na-eji oge ọrụ nhicha ọkaibe ọkachamara. Anyị na-akwado gị ka ịdị gị nwayọ n'ihe ịchọ mma gị dịka o kwere mee. N'ọtụtụ oge, iji mmiri ọkụ na ncha dị nro ga-ezuru gị iji chọọ ọla gị mma.
Pịa ebe a maka ịmatakwu ụzọ dị omimi gbasara idozi ọmarịcha ọla.
You na-arụkwa ọla mma?
Ee, anyị nwere. Anyị na-enye ọrụ ndozi ọla edo na ọla ọcha iberibe. Naanị ị ga-eweta mpempe akwụkwọ gị mebiri emebi na ụlọ ahịa anyị ma anyị ga-eme ike anyị niile idozi ya ozugbo enwere ike. N'ihi oke ọrụ anyị, biko kwe ka ọ dịkarịa ala 1-2 awa nke echere oge maka ọrụ ndozi ọla otu ụbọchị ma ọ bụrụ na tozuru oke. Oge mmecha ọrụ ga-adabere na mgbagwoju anya nke ọrụ ahụ.
You na-arụkwa elekere?
Ee, anyị nwere. Anyị na-enye ọrụ ntanetị niile nke elekere site na mgbanwe batrị ndị a na-eme kwa oge na ndozi mmezi / ndozi. Nwere onwe gị ị weta elekere gị dị egwu na ụlọ ahịa anyị maka nchọpụta na see okwu. Ọ ga-adị ya mma.
Kedu usoro iwu nloghachi gị?
Maka ịzụta mere na-echekwa nke anyị Iwu Returnlọ Nchekwa na Storelọ Ahịa Edekwara nke ahụ edere na nnata nzụta:
Naanị mgbanweta agbanwere kwesịrị ekwesịrị ka eme ya n’ime ụbọchị asaa izu oke.
Maka ịzụta emere n'ụlọ ahịa ọnlaịnụ, Nzuzo Ntanetị anyị na-emetụta. Maka ozi ndị ọzọ gbasara iwu nlọghachi anyị, biko gaa na anyị Iwu Mbupu & Weghachi page.